सेजलको ह त्यामा उनकै प्रेमीको संलग्नता, सेजलको कोठामा आईरहने ब्याक्तिले नै उनलाई …. – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: बुधबार, आषाढ ०२, २०७८ समय: ११:४७:५९
काठमाडौं- झापाको दकममा अध्ययनरत एक छात्राको क र णी पछि ह त्या भएको हुनसक्ने बताईएको छ । शौचालयको कम्बोडमा बेहोस भएको अवस्थामा उनका साथीहरुले उद्धार गरेर लैजाने क्रममा मृत्यु भएको बताईदै आएको थियो ।
इलामकी स्थायी बासिन्दा दमकमा अध्ययनरत छात्रा सेजल कोइरालाको ह त्या भएको दाबीसहित प्रहरीमा किटानी जाहेरी परेपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । यसभन्दा अघि भवितब्य मृत्यु हो की ? भन्ने चर्चा रहेको थियो । सेजलको कोठामा आईरहने ब्याक्तिले नै उनको घाँ टी थि चेर ह त्या गरेको हुनसक्ने अनुमान लगाईएको छ ।
उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोमा भोजपुर घर भई हाल दमकमा बस्दै आएका अरुण राईलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । सेजलको कोठामा आईरहने अरुण र सेजलबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको पनि बताईन्छ ।
दमक ५ स्थित एक घरमा डेरा बसेकी सेजल रेडियोलोजी तेस्रो बर्षमा अध्ययनरत थिइन । प्रहरीले घटनाबारे विस्तृत रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । यद्यपी अनुसन्धानबाट ह त्या नै भएको भन्ने देखिएको श्रोतको भनाई छ ।
पक्राउ परेका राईसंग कोइराला रिलेसनसिप रहेको उनका निकटस्थ साथीहरुले बताएकाछन् । ला गुऔ षध अ धिक प्रयोग गराएर ह त्या गरिएको हुनसक्ने पनि बताइदै आएको छ । यस बिषयमा प्रहरीले चाँडै नै विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने बताईएको छ ।
सेजलालाई बेलुकी करिब ५ः०० बजे साथीले मोबाइलमा सम्पर्क गरेका थिए । त्यसक्रममा मोबाइल नउठेपछि साथी कोठामा पुग्दा उनलाई शौचालयको कम्बोर्टमा बेहोस अवस्थामा भेटेको प्रहरी नायब उपरीक्षक कार्कीले जानकारी दिए । उनलाई तत्कालै लाइफलाइन अस्पताल पुर्याइए पनि बचाउन नसकिएको सेजलाका साथीहरुले बताएका छन् । घटनालगत्तै सेजलाका अभिभावक इलामबाट दमक पुगेका थिए ।